Transcendental Meditation®နည်းစနစ်: အိုင်တီပညာရှင်များများအတွက်ယှဉ်ပြိုင် Edge - mum မှာကွန်ပျူတာပညာရှင်များအစီအစဉ်
ဧပြီလ 10, 2012 /in သတင္းေၾကျငာခ်က္ /by Compro
"စီမံခန့်ခွဲမှုကွန်ပျူတာသိပ္ပံဌာနမှူးဂရက်ဂိုရီ Guthrie ၏ Maharishi တက္ကသိုလ်အဆိုအရUS မှာအိုင်တီပညာရေး၏အနာဂတ်ဆော့ဖ်ဝဲ developer များသူတို့ကိုယ်သူတို့တိုးတက်စေခြင်းဖြင့် software ကိုတိုးတက်အောင်အာရုံစိုက်ပါဝင်သည်။ "
mum ပညာရေး၏ထူးခြားသောကွဲပြားအကျိုးအတွက်အားလုံးကျောင်းသားများနှင့်ဆရာ, ဆရာမများကသူတို့ထောက်လှမ်းရေး, တီထွင်ဖန်တီးမှု, ပြဿနာဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရည်, နှင့်အထွေထွေသုခချမ်းသာဖွံ့ဖြိုးဆဲများအတွက်သက်သေပြနည်းပညာကိုလေ့ကငျြ့သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ ဒီနည်းပညာနီးပါး 700 သိပ္ပံနည်းကျလေ့လာမှုတွေကစိစစ်ခြင်း, ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံးကိုအဓိကယဉ်ကျေးမှုနှင့်ဘာသာတရားကနေခြောက်လလူဦးရေသန်းနေဖြင့်လေ့ကျင့်ခြင်း, ဖြစ်ပါတယ် Transcendental Meditation® technique ကို.
"ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဖှံ့ဖွိုးတိုးတပရော်ဖက်ရှင်နယ်အောင်မြင်မှုသော့ချက်"ဟုဒေါက်တာ Guthrie, ကပြောသည်" နှင့် mum ၎င်းတို့၏နည်းပညာနှင့်ပညာရေးဆိုင်ရာလေ့ကျင့်ရေးတိုးပွားရန်, ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ၏လယ်ပြင်တွင်ကျောင်းသားများကိုအဘို့ဤအခွင့်အလမ်းများကိုမူထူးခြားတဲ့ဖြစ်၏။ "
အားလုံးနောက်ခံကနေကျောင်းသားများ TM အလိုအလျောက်ပျော်မွေ့။
TM အလိုအလျောက်၏နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကိုယ်ထိလက်ရောက်ငါ၏အကုမ္ပဏီအတွက်ထိပ်တန်းဖျော်ဖြေဖြစ်ငါ၏အမှု၌ သာ. စိန်ခေါ်မှုများတက် ယူ. , အပိုမိုင်သွားဖို့ငါ့ကိုဖွ, အလုပ်နှင့်ဘဝကနေစိတ်ဖိစီးမှုရှင်းလင်းစေပါတယ်။ - KI (တရုတ်)
ငါ့အဘို့ TM အလိုအလျောက်ကျင့်သုံး၏အကျိုးကျေးဇူးများတစ်ခုမှာအေးဆေးနှင့်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အလေ့အကျင့်ရှိခြင်းသင်လိုအပ်စဉ်းစားသောအခါရုံကလုပ်နေတာထက်ပိုမိုပေးဆောင်။ ဒါဟာတဦးတည်းအားဖြင့်စိတ်ဖိစီးမှုတဦးတည်း၏အလွှာချွတ် pealing နှင့်နက်ရှိုင်းသောမိမိကိုယ်ကိုကြုံနေရ၏ဖြစ်စဉ်ပါပဲ။ ငါပိုမြန်အရင်ကထက်သင်ယူတစ်နေ့တာအတွင်းပိုကောင်းအာရုံစူးစိုက်နှင့်ညအချိန်တွင်အလုံအလောက်အိပ်ပျော်ခြင်းရနိုင်ပါ၏။
အကြှနျုပျ၏မန်နေဂျာကိုငါ့တိုးတက်မှုနှင့်အတူငါပို့တာဘယ်မည်သောအကောင်နှင့်အလွန်မင်္ဂလာရှိ၏။ သူကငါကျန်းကျန်းမာမာအစာစားခြင်းအတွက်လုံလောက်သောအိပ်စက်မှုရှိခြင်းနှင့်လည်းတှေးတောဆငျခွနေဖြင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်ဂရုစိုက်ဆိုတဲ့အချက်ကို likes ။ - SM (အီရန်)
TM အလိုအလျောက်၏နေ့စဉ်အလေ့အကျင့်ကိုအမြဲပုဂ္ဂိုလ်ရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘဝ၌အသုံးဝင်ခဲ့သည်။ ဒါဟာတပ်လှန့်ခြင်းနှင့်အေးမြငါ့ကိုစောင့်ရှောက်။ - SM (နီပေါ)
အဆိုပါ TM အလိုအလျောက် technique ကိုငါ၏အလေ့အကျင့်ငါ့အလုပ်နှင့်နေ့ကဘဝတစ်လျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုသောနေ့၌အကောင်းတစ်အာရုံရှိကူညီပေးခဲ့တယ်။ - AA ကို (အီသီယိုးပီး)
ကျွန်မအလုပ်မှာ, ငါ့ DE သင်တန်းအပေါ်ဖြုန်းအချိန်ပမာဏကိုနှင့်အတူ, ငါ TM အလိုအလျောက်မပါဘဲရှင်သန်နိုင်ဘူး။ ငါတစ်နေ့ရဲ့အဆုံးမှာတင်းမာနေခြင်းနှင့်ပင်ပန်းရကြောင်းသတိပြုမိပေမယ့်အဖြစ်မကြာမီငါတွေးတောဆင်ခြင်သကဲ့သို့ငါအားပြန်သွင်းနိုင်ခံစားရသည်။ - ET (ကနေဒါ)
ပုံမှန် TM အလိုအလျောက်အလေ့အကျင့်အခက်အခဲများ၏အချိန်များတွင်လတ်ဆတ်နှင့်အေးဆေးဆက်လက်တည်ရှိဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးခဲ့တယ်။ ငါသည်ငါ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်နှိုင်းယှဉ်ပါကသာမန်နည်းလမ်းဖိအားကိုင်တွယ်ပြီဟုခံစားရ, ဤကျိန်းသေပုံမှန်အစည်းအဝေး TM အလိုအလျောက်အလေ့အကျင့်၏ရလဒ်ဖြစ်ပါသည်။ - LP (နီပေါ)
ငါသည်နောက်ကျဖိအားအများကြီးကိုကိုင်တွယ်နိုင်ခဲ့ခြင်းနှင့်ကြောင့် TM အလိုအလျောက်ရန်အလွန်လွယ်ကူစွာ multitask နိုင်ခဲ့ပါပြီ။ - DP (အိန္ဒိယ)
TM အလိုအလျောက်နဲ့အတူကျွန်မပိုပြီးအသေးစိတ်များနှင့်ပြဿနာများ, အသစ်သောနည်းပညာများကိုလေ့လာသင်ယူ၏လွယ်ကူခြင်း, အာရုံစူးစိုက်လွယ်ကူပြီးအခြေအနေတွင် switching တစ်ဦးထက်ပိုသော In-depth ကိုချဉ်းကပ်ခံစားရသည်။ - SM (ဘူလ်ဂေးရီးယား)
အလုပ်နည်းနည်းစိတ်ဖိစီးမှုဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကသတ်မှတ်ရက်ရောက်လာသောအခါ, အထူးသဖြင့်, TM အလိုအလျောက်လွယ်ကူစေသည်။ - SM (အီသီယိုးပီး)
Transcendental တှေးတောဆငျခွငါ့ကိုငါ့အသက်ကို၏ဤမသေချာမရေရာကာလ၌စိတ်ဖိစီးမှု minimize ကူညီပေးသည်ကြောင်းအတွင်းငြိမ်းချမ်းရေးနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ပေးသည်။ - DR (ဖိလစ်ပိုင်)
TM အလိုအလျောက်ငါ့ကိုထိုကဲ့သို့သောဆေးပြားသို့မဟုတ်ကော်ဖီအဖြစ်မည်သည့်ပြင်ပဓာတုပစ္စည်းမသုံးဘဲငါ၏အတာဝန်များကိုအာရုံစိုက်ဖို့ကူညီပေးသည်, ထိုသို့အလုပ်နှင့်လှုပ်ရှားမှုများ၏ရှည်လျားသောနေ့ကအပြီးအကြှနျုပျ၏ကိုယျခန်ဓာလတ်ဆတ်စေသည်။ - VA သို့ (ကိုလံဘီယာ)
အကြှနျုပျ၏လက်ရှိသင်တန်းအချိန်နှင့်အာရုံစိုက်မှု၏အတော်လေးတွေအများကြီးလိုအပ်တစ်ခက်ခဲတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ TM အလိုအလျောက်အလေ့အကျင့်သဘာဝကျကျစိတ်ဖိစီးမှုသက်သာနှင့်တစ်ချိန်တည်းမှာလျှော့ပေါ့ခံနေရစဉ်အာရုံစိုက်ဖို့ကျွန်မကိုကူညီပေးသည်။ - SV (သီရိလင်္ကာ)
အကြှနျုပျ၏စိတျကိုငါ့ကိုယ်အိပ်ပျော်ခံစားရ, ရှင်းပါတယ်။ TM အလိုအလျောက်ငါ့ကိုစိတ်ဖိစီးမှုလျှော့ချကူညီပေးသည်။ TM အလိုအလျောက်များ၏အလေ့အကျင့်အလုပ်ပေါ်နှင့်ငါ၏အပုဂ္ဂိုလ်ရေးနေ့စဉ်လှုပ်ရှားမှုများ၌ငါ့စွမ်းဆောင်ရည်ကိုတိုးမြှင့်ထားသည်။ - LA က (ဒိုမီနီကန်သမ္မတနိုင်ငံ)
အဆိုပါ Transcendental တှေးတောဆငျခွ technique ကို၏အလေ့အကျင့်ကတဆင့်ကျနော်ပိုကောင်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုနားလည်ရန်လာကြပြီ, နှင့်မည်သို့ငါ၏အကြံအစည်များနှင့်အတွေ့အကြုံများ, ငါ့နေ့စဉ်အသက်တာကိုသြဇာလွှမ်းမိုး။ ကျွန်မပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရငါ၏အဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှုနှင့်ငါ့ပစ်မှတ်ပိုပြီးအာရုံစိုက်နေဖို့နိုင်စွမ်းတိုးတက်လာကြပါပြီ။ - GA (ဂါနာ)
TM အလိုအလျောက်ပုံမှန်အလေ့အကျင့် software ကိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်အရေးပါသည်ဖြစ်သောရှင်းလင်းစဉ်းစားတွေးခေါ်ထုတ်လုပ်သည်။ TM အလိုအလျောက်လုပ်နေတာစိတ်ဖိစီးမှုလွှတ်ပေးရန်ငါ့ကိုကူညီပေးသည်ငါ့ကိုအောက်ပါနေ့၌လတ်ဆတ်သောစိတ်ဖြင့်ငါ၏အမှုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။ - SA (သီရိလင်္ကာ)
ငါစိတ်ဖိစီးမှုများနှင့်ပမာဏအများကြီးလည်းမရှိသည့်အခါရှုပ်ထွေးပြဿနာတွေဖြေရှင်းရေးနီးပါးမဖြစ်နိုင်ကြောင်းကြုံတွေ့ကြသည်။ Transcendental တှေးတောဆငျခွထိုကဲ့သို့သောအခြေအနေများ၌ငါ့ကိုကူညီပေးသည်။ ငါအိမ်ပြန်ပြီးနောက်နောက်တဖန်အလုပ်မလုပ်ခြင်း, မသွားမီနံနက်ယံ၌တွေးတောဆင်ခြင်ပါ။ TM အလိုအလျောက်ပဲ 20 မိနစ်ထပ်နံနက်လတ်ဆတ်ဖို့ကျွန်မကိုတတ်၏။ - AA ကို (နီပေါ)
ပုံမှန် TM အလိုအလျောက်အလေ့အကျင့်ကွန်ပျူတာပညာရှင်များ-သရုပ်ြပ re နှင့်ပိုပြီးစနစ်တကျဦးနှောက်အတွက်သူတို့ရဲ့အသက်တာ၌အောင်မြင်မှုရရန်ကူညီပေးသည်။
အဆိုပါ TM အလိုအလျောက် technique ကိုအားလုံးကျောင်းသားများအဖို့ mum ထံမှလက်ဆောင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ TM အလိုအလျောက်သင်လျော့နည်းစိတ်ဖိစီးမှုနှင့်အတူအသက်ရှင်ကူညီပေးပါမည်။ - TA (မြန်မာ)
Tags: Transcendental Meditation® technique ကို
https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/2012_04-01.jpg 284 462 Compro https://compro.mum.edu/wp-content/uploads/compro-web-logo-sm.png Compro2012-04-10 21:18:102019-05-31 10:57:01Transcendental Meditation®နည်းစနစ်: အိုင်တီပညာရှင်များများအတွက်ယှဉ်ပြိုင် Edge